Activities Plan » Computer University (Mandalay)
Home » About Us » Activities Plan
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)အနေဖြင့် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးတွင် လိုအပ်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
Computer University (Mandalay) in Mandalay Region is exerting efforts to boost the development of human resources and research required in building nation.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်တွင် ဘွဲ့ကြိုကွန်ပျူတာ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာသင်တန်းများကို ပထမနှစ်မှ စတုတ္ထနှစ်အထိ သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပြီး ကျောင်းသား/သူ စုစုပေါင်း(၁၃၅၄)ဦး တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိ သင်ကြားရေး ဆရာ/မ စုစုပေါင်း (၁၂၆)ဦးဖြင့် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။
A total of (126) teaching staff are giving lectures toatotal of (1354) students learning from first year to fourth year in 20147-2015 academic year undergraduate programme of Computer Science and Technology of Computer University(Mandalay).
(က) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)တွင် ဘွဲ့ကြို ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ သင်တန်းများကို မူလတွင်(၃)နှစ်ဖြင့် သင်ကြားပို့ချခဲ့ရာမှ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ပညာသင်နှစ်တွင် (၄)နှစ် သို့ လည်းကောင်း၊ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင်နှစ်တွင် (၅)နှစ်သို့လည်းကောင်း စနစ်ပြောင်းလဲ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။
(ခ) ယခု(၂၀၁၄-၂၀၁၅) ပညာသင်နှစ်တွင် ဂုဏ်ထူးတန်းများကို ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခြင်း မရှိတော့ဘဲ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ ပြီး‌ြေမာက်အောင်မြင်ပြီး အဆင့်မီပါက မဟာဘွဲ့သင်တန်း များသို့ ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သော သင်တန်းနှစ်များနှင့်အညီ လက်တွေ့ပိုင်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော Lab ပစ္စည်းများကို နှစ်အလိုက် ထပ်မံ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) တက္ကသိုလ်တွင် လက်ရှိသင်ကြားလျှက်ရှိသော သင်ရိုးများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရန်နှင့် Industrial လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြုပြင်‌ပြောင်းလဲသင်ကြားခဲ့ ပါသည်။
(င) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) စာကြည့်တိုက်တွင်လည်း ပညာသင်နှစ်အလိုက် သင်ကြားရေး IT စာအုပ်များအပြင် Business Oriented Subject နှင့် သက်ဆိုင်သော စာအုပ်များ၊ ဘာသာရေး စာအုပ်များ၊ ဗဟုသုတ စာအုပ်များကို ထပ်မံဖြည့်ဆည်းထား ရှိပါသည်။
(စ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ IT ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို ကျယ်ပြန့်စွာလေ့လာသိရှိနိုင်ရန်နှင့် Industry Readiness ဖြစ်စေရန်အတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်၍ Workshop များ၊ Training များနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဟော‌ပြောပွဲများကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ ပါသည်။
3. Completion Situation
(a) Three years undergraduate programme of Computer Science and Technology was originally conducted at Computer University (Mandalay). However, four years programme in 2011-2012 academic year as well five years programme in 2012-2013 academic year has been upgraded.
(b)At present, honours courses have no longer been conducted in 2014-2015 academic year. Only qualified undergraduates are allowed to join postgraduate programme.
(c)In accordance with upgraded programme, necessary lab equipments have been fulfilled year by year for effective teaching in practical field.
(d)Syllabuses or curricula of Computer University have been altered and taught in order to keep abreast of international standard and fulfill industrial needs.
(e)Besides teaching-related IT books, business-oriented subject books, religion books, and general knowledge books have been provided in the library of Computer University(Mandalay).
(f)From 2012-2013 academic year, inviting local and overseas employers, workshops, training programs and seminars on business have been conducted for students to widely learn IT field of subject and keep industry readiness.
၄။ ရှေ့ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်
(က) သင်ကြားရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် မပြတ်ရရှိနိုင်ရေး အလေးပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ပင်မသုံးထပ်စာသင်ဆောင်၏ နှစ်ထပ်ဝဲ/ယာ တောင်ပံနှစ်ဖက်အား O ပုံစံ အဖြစ် ဖြည့်စွက် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၄၅၀ပေ× ၄၀ပေ) ဆောက်လုပ်နိုင်ရေး တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) လက်ရှိ သင်ကြားပေးနေသော ဘာသာရပ်များအပြင် လိုအပ်သော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ဖြင်‌ အမြဲ‌ပြောင်းလဲနေသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး တက္ကသိုလ်၏ Academic and Research အတွက် ပိုမို ကောင်းမွန် ထိရောက်သော ပညာရေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်လာနိုင်ခြင်း၊
(ဃ) Industry အသီးသီးမှ စိတ်ဝင်စားသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်နှင့် Industry ၏ Demand ကို သိရှိနိုင်ရန်၊ IT Company များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ IT အသင်းအဖွဲ့များနှင်‌့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပလုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမို သိရှိလာနိုင်ပြီး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို လိုအပ်သလို ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် Industry Readiness ဖြစ်သော ဘွဲ့ရလူငယ်များ မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊
(င) Industry Readiness ဖြစ်သော ဘွဲ့ရလူငယ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားရရှိမှုအတွက် စိန်ခေါ်မှုများကို အထိုက်အလျှောက်‌ဖြေ‌ရှင်းပေးနိုင်ခြင်း၊
4. Preceding Procedures
(i) First Priorities
To emphasize onacontinuous speed-up of internet which can necessitated for teaching and researches.
To present the plan to build left and right sides of the three-storied main building in0shape extension (450’×40′).
To createabetter education system for Academic and Research that can supplement continuously the necessitated curriculum besides the currently teaching modules by modifying and reinforcing the variation of educational needs.
To become an interesting university from different industries and to nurture graduated youths of Industry Readiness by reinforcing the curriculum if it is necessary and by communicating promotion with IT company, IT associations and business men in order to know more about the need of local and foreign business and to acknowledge the Demand of such Industries.
To solve moderately the challenge of getting students by nurturing Industry Readiness of graduated youths.
(က) ခေတ်မီ Specialization Lab များ နှင့် Lab ပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) စာကြည့်တိုက် (၁၀၀ပေ× ၅၀ပေ) တည်ဆောက်ခြင်း၊
(ဂ) တက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ/မများ၏ အရည်အသွေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ဆရာ/ဆရာမများ Foreign Exposureများ ရရှိနိုင်ရန် ပြည်ပသို့စေလွှတ်ခြင်း၊ ဆရာ/ဆရာများ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန် ပြည်ပမှ ပညာရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်၍ သင်တန်းပို့ချစေခြင်းများကိုလည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားခြင်း၊
(ဃ) နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ တက္ကသိုလ်နှစ်ခုအကြား MOU များ ရေးထိုးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်မြင့်မားစေရန်၊ Proficiency ဖြစ်စေရန်နှင့် Four Skills ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်စေရန် အတွက် Proficiency Courses များကို သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း၊
(စ) နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ချက်စံများနှင်‌့ ကိုက်ညီသည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် ဖြစ်လာစေရန်နှင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု (ISO)လက်မှတ်ရရှိနိုင်စေရန် အတွက် အရည်အသွေး အသိအမှတ်ပြု အေဂျင်စီ (Quality Assurance Agency) များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အစစ်ဆေးခံနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်မျာကို အသေးစိတ်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် သွားခြင်း၊
(ဆ) နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ် အဆင့်အတန်းနှင့် လျော်ညီသော တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အဆောင်များ ထားရှိပေးနိုင်ရေးနှင့် တိုးချဲ့လာသော Specialization Lab များတွင် လိုအပ်လာသော Lab ပစ္စည်းများအတွက် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)တွင် ဘွဲ့ကြိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ သင်တန်းများကို ပထမနှစ်မှ ပဥ္ဇမနှစ်အထိ သင်တန်းကာလ(၅)နှစ်ဖြင့် တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ပြီး ပြီးမြောက် အောင်မြင်၍ အဆင့်မီပါက မဟာဘွဲ့သင်တန်းများကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်စီစဉ်ထားရှိခြင်း၊
(ဈ) နှစ်ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ (၁၀၀ပေ× ၄၅ပေ) တည်ဆောက်ခြင်း၊
(ည) ကျောင်းသား/သူများ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ပညာရပ်များ လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ရန် မိုးလုံလေလုံ အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊
(ii) Second Priorities
Supplementing with specialization lab and accessories.
Building Library which is wide in .
Making exchange programs with foreign countries by inviting professional experts to give lectures in order to promote the quality of University teachers continuously.
Signing MOU between two universities in order to make discussion and cooperating sections with foreign countries.
Giving lectures to teachers and students to be proficient4skills in English Language.
Implementing detail features with Quality Assurance Agency to get ISO certification and to become International Standard University.
According to financial year, arranging government hostels for students and providing specialization labs with peripherals.
Planning to open clauses for Master degree for those who have passed five years academic period; from first year to fifth year students of Computer University, Mandalay.
Building two stories staff dwelling which is wide in .
To establish weather-proof stadium gymnasium for students.